Nhoroondo yeGerman, nzvimbo yenzvimbo, mamiriro ekunze eGerman uye hupfumi
Germany, izita rayo rinodanwa seFederal Republic yeGerman muzvinyorwa zviri pamutemo, yakagamuchira fomu yeFederal Parliamentary Republic uye guta rayo guru ndiBerlin. Tichifunga nezvehuwandu hwevanhu, huwandu hwenyika, hunosvika 81,000,000, hunoratidzwa se87,5% yevagari veGerman, 6,5% yevagari veTurkey uye 6% yevagari vemamwe marudzi. Nyika inoshandisa Euro € semari yayo uye kodhi yenyika dzese dzenhare +49.
Mushure meHondo Yenyika Yechipiri, United States, Britain neFrance matunhu akabatana akabatana neFederal Republic yeGerman, iyo yakavambwa muna Chivabvu 23, 1949, neGerman Democratic Republic, iyo yakaratidzwa seEast Germany uye yakavambwa musi wa7 Gumiguru 1949. , vakabatana uye vakaumba iyo Federal Republic yeGerman musi wa3 Gumiguru 1990.
Germany inyika iri muCentral Europe. Denmark kuchamhembe, Austria kumaodzanyemba, Czech Republic nePoland kumabvazuva, uye Netherlands, France, Belgium neLuxembourg kumadokero. Kuchamhembe kwenyika kune North Sea neBaltic Sea, uye kumaodzanyemba kune makomo eAlpine, uko nzvimbo yepamusoro yenyika iri Zugspitze. Tichifunga nezvejogirafi yeGerman, zvinoonekwa kuti zvikamu zviri pakati zvine masango uye mapani anowedzera patinenge tichienda kuchamhembe.
Mamiriro ekunze akadzikama munyika yese. Mhepo ine hunyoro yekumadokero uye mafungu anopisa anobva kuchamhembe kweAtlantic anokonzerwa nemamiriro ekunze akapfava. Zvinogona kutaurwa kuti mamiriro ekunze ekondinendi anonyanya kushanda paunenge uchienda kunzvimbo yekumabvazuva kwenyika.
Jerimani inyika ine guta rakasimba, hupfumi hwemusika wemagariro, vashandi vane hunyanzvi uye huwandu hwehuori hwakaderera Nehupfumi hwayo hwakasimba, tinogona kutaura kuti Europe ndiyo yekutanga uye nyika ndeyechina. Frankfurt-based European Central Bank inogadzirisa mutemo wezvemari. Tichitarisa kunzvimbo dzinotungamira dzeindasitiri dzenyika, minda senge mota, ruzivo rwehunyanzvi, simbi, kemesitiri, kuvaka, simba uye mushonga zvimire. Uye zvakare, nyika inyika yakapfuma ine zviwanikwa zvakaita se potassium iron, mhangura, marasha, nickel, gasi rechisiko uye uranium.